Izindlu e- Neeley Mountain
Alto, New Mexico, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-VTrips
I-Rustically quaint, i-Neeley Mountain House iyindawo enhle ongabiza ngayo ekhaya ngesikhathi sakho e-Ruidoso. Inamakamelo okulala amabili, amagumbi okugeza amabili i-Neeley Mountain House ilala ezine. Jabulela ubuciko obuhle, indawo yomlilo ethokomele, indawo yokuhlala yangaphandle, nobhavu oshisayo ngombono wokufela!
Kungakhathaliseki ukuthi usohambeni lothando noma eholidini elijabulisayo, i-Neeley Mountain House ihlinzeka ngendawo nazo zonke izinsiza ozozidinga. Lapho ufika, uzoqaphela ubumfihlo nokuthula kwaleli khaya. Uma usungenile, uzothanda ukunethezeka njengoba ubona indawo yomlilo kanye nempahla ethokomele yegumbi elikhulu. Ukunikeza osofa ababili abakhele indawo yomlilo ethokomele, wena nesivakashi sakho nizothola indawo eningi yokubuyela emuva niphumule e-Neeley Mountain House. Bheka i-panoramic kuwo wonke amawindi! Umqondo ovulekile wezinga eliyinhloko wenza ukuzijabulisa kube nomoya! Indawo yokuhlala eyengeziwe itholakala phansi kwezitebhisi ezi-spiral. Lapha uzothola itafula lephuli kanye nomabonakude onesidlali se-DVD nesidlali se-VHS. Jabulela izinhlelo zakho eziyintandokazi kumabonakude wesikrini esiyisicaba ngemva kosuku olumatasatasa lokuhlola i-Ruidoso.
Uzoyithanda i-charm yomqondo ovulekile ekhishini ngenkathi udala ukudla kwakho okuphekwe ekhaya okuthandayo. Ikhishi linempahla emhlophe kanye nendawo eyanele yokubala. Ikhishi lihlome ngokugcwele umshini wokugeza izitsha, i-microwave, isiqandisi nesiqandisi, isitofu esiphezulu esinohhavini kanye nezitsha zokupheka nokudla ukupheka ukudla okumnandi ngesikhathi uhlala. Ibha yasekuseni yenza izivakashi zikwazi ukugcina inkampani yabapheki. Indawo yokudlela exhumene ihlinzeka ngetafula lokudlela elinezihlalo zazo zonke izihambeli zakho.
Lala ngokuzwakalayo ekamelweni eliyisisekelo elizimele e-Neeley Mountain House elifakwe umbhede olingana nenkosi. Uzothola nendawo eningi yokuzenzela ekhaya. Jabulela ukubuka kusuka embhedeni futhi uthathe konke ukukhanya kwemvelo! Kukhona igumbi lokugezela elikhulu eliyisisekelo elihlinzeka ngobhavu ocwiliswayo, ishawa yokuhamba ngezinyawo kanye nelize elinendawo eningi.
Igumbi lokulala lesibili linikeza izindawo ezinhle kakhulu zezingane! Kufakwe nemibhede yosayizi okabili. Indlu yokugezela yesibili nayo itholakala eNeeley Mountain House. Amalineni ombhede namathawula ahlinzekwa ngesikhathi sokuhlala kwakho. Iwasha nesomisi nakho kutholakala kuleli khaya futhi kuhlale kuwusizo!
Uma uzithola ufuna ukuncintisana, yehlela phansi ezitebhisini ezivunguzayo bese udubula ichibi nezivakashi zakho! Izinsuku ezinemvula ngeke zonakalise isikhathi sakho e-Neeley Mountain House- hlola imidlalo noma faka imuvi futhi uphumule kusofa onethezekile.
Umoya omusha nokukhanya kwelanga kuzokudonsela ngaphandle. I-Neeley Mountain House ihlinzeka nge-balcony enhle enendawo yokuhlala. Jabulela ikhofi lakho lasekuseni emafini! Lahleka encwadini enhle ngenkathi ujabulela isimo sezulu esihle sase-Ruidoso. Ubumfihlo baleli khaya abunakushaywa! Ungakwazi futhi ukujabulela umbono omangalisayo ovela kubhavu wakho wangasese oshisayo! Leli khaya lihlinzeka ngezinsiza ezinhle kangaka, ukubuka okumangalisayo nokunethezeka kwazo zonke izivakashi zakho.
Uhambo lwakho oluya e-Ruidoso, kungakhathaliseki ukuthi lwebhizinisi noma ubumnandi, luzokunikeza izinkumbulo ezihlala impilo yonke. Ngakho konke ukuzijabulisa okujabulisayo nezinketho zokudlela nje ukugxuma, ukweqa, nokugxuma, i-Neeley Mountain House inikeza indawo ekahle yekhaya lakho kude nasekhaya. Ngendawo yangaphakathi evulekile nenhle kanye nesikhala sangaphandle esihle, uzothola ukuthi iNeeley Mountain House inokuthile kwawo wonke umuntu. Pakisha izikhwama zakho futhi ulungele uhambo ozolukhumbula. Shayela manje ukuze ubhukhe ukuhlala kwakho e-Neeley Mountain House!
Sicela ukhumbule ukuthi iRuidoso iyidolobha elisezintabeni elineqhwa neqhwa ebusika. Lokhu kungathinta izimo zokushayela nezokupaka ngaphandle kokunaka indawo, i-driveway, noma imigwaqo. 4x4 noma amaketango angadingeka phakathi nezinyanga zasebusika ukuze ufinyelele ikhaya lakho. Ubukhulu bezimoto ezi-2.
Igumbi lokulala 1: Igumbi lokulala lokuqala
Igumbi lokulala 2: Igumbi lokulala lesibili
I-Rustic futhi iyinhle, i-Neeley Mountain House iyindawo enhle ongabiza ngayo ekhaya ngesikhathi sakho e-Ruidoso. Inamakamelo okulala amabili, amagumbi okugeza amabili i-Neeley Mountain House ilala ezine. Jabulela ubuciko obuhle, indawo yomlilo ethokomele, indawo yokuhlala yangaphandle, nobhavu oshisayo ngombono wokufela!
Lala kahle ekamelweni eliyinhloko elizimele e-Neeley Mountain House elinombhede ongangenkosi. Uzothola nendawo eningi yokuzenzela ekhaya. Jabulela ukubuka kusuka embhedeni futhi uthathe konke ukukhanya kwemvelo! Kukhona igumbi lokugezela elikhulu elinikeza ubhavu ocwiliswayo, ishawa yokungena endlini kanye nendawo eyize ene-slart o.
Hlola ezinye izinketho ezise- Alto namaphethelo